သင့်ရဲ့ IPHONE နှင့်အတူ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလုပ်နည်း - IOS အတွက် - 2019
သင့်ရဲ့ iPhone နှင့်အတူ QR-Code ကို scan လုပ်နည်း
အင်တာနက်ကိုတဆင့် TV ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အဆင့်မြင့်နည်းပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်နားမလည်တစ်ခုခုမထင်ထားဘူး။ သို့သော်အားလုံးအချိန်များတွင် "ရေနွေးအိုး" ရှိပါတယ်, မကြာသေးမီကကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုသူတို့အဘို့ဤဆောင်းပါး၌ (အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားသူတွေ) သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ TV ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ဤနည်းလမ်းကိုအထူးပစ္စည်းကိရိယာ, ဒါပေမယ့်သာအထူး software ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
ကျနော်တို့အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြု အိုင်ပီ-TV ကို Player ကို။ ဒါဟာသင်ပွင့်လင်းရင်းမြစ်များမှသို့မဟုတ်ဖွင့်စာရင်းများကိုကအင်တာနက် TV ကိုပံ့ပိုးပေးမှသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် IPTV စောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုကစားသမားသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
အိုင်ပီ-TV ကို Player ကို Download လုပ်ပါ
installation ရဲ့ IP-TV ကို Player ကို
1. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အတူဒေါင်းလုပ်လုပ် file ကို run IpTvPlayer-Setup.exe.
2. သင့် hard drive ကိုနဲ့ settings ပေါ်တပ်ဆင်ခြင်းတည်နေရာရွေးချယ်ခြင်း။ သင်အနည်းငယ်တွေ့ကြုံခံစား, ငါတို့သည်ဖြစ်သကဲ့သို့အရာရာကိုစွန့်ခွာသင်သည်အဘယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး။ အကယ်.
3. ဒီအဆင့်မှာ, သင် Yandex Browser ကို install လုပ်ဖို့ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလိုအပ်ပါလျှင်, checkboxes ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ကျီးကန်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "Install".
4. Finish ကိုကစားသမား installed, သင်နောက်ထပ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
အဆိုပါပစ်လွှတ်အိုင်ပီ-TV ကို Player ကို
program ကိုစတင်သည်အခါပေးတဲ့ dialog box ကိုတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူကိုရွေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လိပ်စာ (link ကို) သတ်မှတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ် hard disk ကိုရုပ်သံလိုင်းသီချင်းစာရင်းကိုပုံစံပေါ်တွင်တည်နေရာ m3u.
မည်သည့်လင့်ခ်သို့မဟုတ်သီချင်းစာရင်းပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါလျှင်, ပေးသူ drop-down စာရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအချက်လုပ်ကိုင်ဖို့အာမခံချက် "အင်တာနက်, ရုရှ TV နဲ့ရေဒီယို".
အင်ပါယာကစာရင်းထဲတွင်အချို့ပံ့ပိုးပေး၏ဘာသာပြန်ချက်ကြည့်ဘို့လည်းပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူ (🙂ဒုတိယ) ပထမရရှိခဲ့ပါတယ်တယ် - Dagestan Beacon ကွန်ယက်။ သူစာရင်းအတွက်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်ပရိုဂရမ် settings ၏ပံ့ပိုးပေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ format တစ်ခုထဲတွင်လိပ်စာ (တည်နေရာ) သီချင်းစာရင်းကိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုသတ်မှတ်လယ်လည်းရှိပါတယ် XMLTV, JTV သို့မဟုတ် TXT.
သင်တစ်ဦး link ကို click နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ "ပေးမယ့်စာရင်းထဲက preset Upload လုပ်ပါ" ဒါဟာ startup ကဲ့သို့တူညီသောပေးတဲ့ dialog box ကိုရလိမ့်မည်။
အဆိုပါ setting များကိုပေါ်မှာ double-click သို့မဟုတ် drop-down list ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရှိ click နဲ့ပျော်မွေ့ယခုအဓိက window ထဲမှာရုပ်သံလိုင်းကို select, ပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးလက်ပ်တော့မှတဆင့် TV ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကတီဗီအသွားအလာအတော်လေးအများကြီးစားသုံး, ဒါကြောင့်သင်န့်အသတ်အကောက်အခွန်များမဟုတ်လျှင် "ဟုအဆိုပါတီဗီပိုင်ရှင်မဲ့🙂စွန့်ခွာမနေပါနဲ့" ။
သင့်ရဲ့ PC မှာတီဗီကြည့်ရှုဘို့အစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုပါ